Iindaba -Imithombo ye-Antibacterial powder enamathela kwimarike inokulindelwa
Unyango lwe-Antibacterial powder
Ngokophando lwakutsha nje olwenziwe ziiMarket kunye neeMarket, intengiso yehlabathi yokuthambisa i-antibacterial powder izakuba malunga ne- $ 1.5 yezigidigidi ngo-2020 kwaye ifike kwi-2.7 yezigidigidi zeedola ngo-2025, kunye nenqanaba lokukhula ngonyaka ukuya kuthi ga kwi-12% ngeli xesha. Ngenxa yefuthe lobhubhane we-COVID-19, imfuno yokugqunywa kwepowderbacterial powder kwicandelo lezempilo iyaqhubeka nokukhula, kwaye kwixa elizayo, inqanaba lokuqwalaselwa kwento yokuqaba umgubo we-antibacterial powder iya kuqhubeka inyuka.
Imeko yehlabathi imbi, kwaye inani elipheleleyo labantu abosulelekileyo lisenyuka. Ukwenza izigulana ukuba zifumane unyango olufanelekileyo kunye nokuthintela ukusasazeka kwentsholongwane, kumiselwe izibhedlele kunye nezixhobo zethutyana kumazwe amaninzi. Ezi ndawo, kubandakanya nezibhedlele zoqobo, zinesidingo sokusebenzisa izinto zokuthambisa umgubo, ezinje ngezibambo zeminyango, iibhedi, izixhobo zokuxilonga, njlnjl. Oku kudlale indima entle kumlo wenoveli yeCoronavirus.
Uphando lubonisa ukuba kumazwe ahambele phambili nakwimimandla, imfuno yesicelo somoya kunye nenkqubo yokungenisa umoya (HVAC) kwindawo zokuhlala, ezorhwebo, amaziko oluntu, imveliso yemizi-mveliso kunye nezinye iindawo zibonisa imeko yokwanda okucacileyo. Nangona kunjalo, kwinkqubo yokujikeleza komoya, ifuthe lokungunda kumgangatho womoya yeyona nto iphambili kwinkqubo ye-HVAC. I-Mold spores evela ngaphandle ingena kwinkqubo ye-HVAC kwaye isasazeka ngemibhobho kuso sonke isakhiwo, ethi yona yenze iikholoni ezintsha zokubumba. Ngaphezulu kweepesenti ezingama-80 zomgangatho womoya wangaphakathi kunye ne-aleji ezibangelwa kukungunda, ngokwe-World Health Organisation. Iiarhente zikarhulumente ezininzi kunye nemibutho yezamashishini imisele imigangatho kunye nemigaqo yomgangatho womoya ongaphakathi kwizakhiwo. Njengenyathelo lokhuselo, i-antimicrobial powder coating ayinqandi kuphela ukukhula komngundo kunye nezinye iibacteria, kodwa iyanciphisa iindleko zokugcina iinkqubo ze-HVAC.
Imigangatho yelizwe liphela kunye nemimiselo yomgangatho womoya ongaphakathi nayo ihlengahlengisiwe ukuphendula kuqhambuko lwe-COVID-19, okukhokelele kukonyuka okubonakalayo kwimfuno yonyango lwe-antimicrobial coating kwiinkqubo ze-HVAC. Ngokwazisa okuphuculweyo komoya kunye nokwanda kwemfuno yofakelo lwenkqubo ye-HVAC, i-antimicrobial powder Coings kulindeleke ukuba iqhubeke nokukhula ngamazinga aphezulu kule minyaka imbalwa izayo.
Kumazwe ahambele phambili nakwimimandla, iimveliso ze-antimicrobial kufuneka nazo zihambelane nemigangatho kunye nemigaqo ekhutshwe ziiarhente zikarhulumente wasekhaya. E-United States, umzekelo, i-antibacterial powder Coating kufuneka ithobele imigaqo ye-EPA. Phambi kokuvunywa, isambatho ngasinye somgubo we-antimicrobial powder kufuneka kuvavanywe umngcipheko kwaye uchongwe liziko elizimeleyo lophando lwenzululwazi, umzimba (njenge-EPA, i-FDA, njl. Njl.) Phambi kokuba ibe nelayisensi yokungena kwintengiso. Ukongeza, kwezinye iindawo, ngakumbi kwicandelo lezonyango, i-nanoparticles yetyhefu yatsala umdla, inento yokwenza neempawu zezi zentsimbi hayi i-nanoparticles morphology inomahluko omkhulu kakhulu, ikakhulu kwimiboniso yetyhefu kunye nemisebenzi yebhayoloji yezi zinto zinyithi, njengokuvezwa kwexesha elide kwisilivere, ukutyabeka ubhedu, kunokunyusa umngcipheko kwimpilo (efana nolusu, iingxaki zokuphefumla, njl.). Ke ngoko, ukukhula kophahla lwe-antibacterial powder coatings kunzima kakhulu.
Kucacisiwe ukuba njengearhente ye-antibacterial, isilivere sesona sicelo sikhula ngokukhawuleza kwiimfuno zokuthambisa umgubo. Isilion ion ineempawu ezifanelekileyo zokulwa neentsholongwane kunye ne-antiviral kwaye inobungozi obuphantsi ebantwini. Ngokuqhubeka kwezinto ezintsha zetekhnoloji, abavelisi bokutyabeka basebenzise ngempumelelo isilivere yokuthambisa umgubo kwizixhobo zonyango (ezinje ngezixhobo zotyando, ukufakelwa kwezicubu, njl.njl.), Ngaloo ndlela kukhuthazwa ukukhula kwemakethi yokutyabeka yomgubo. Abahlalutyi bakholelwa ukuba i-antimicrobial powder Coating yeyona ikhula ngokukhawuleza kwimfuno kwicandelo lezempilo. Umgubo we-antibacterial powder uzibophelele kulwakhiwo lwendawo ekhuselekileyo necocekileyo, ezibhedlele, indawo zoqhaqho, umphezulu wezixhobo zamazinyo (ezifana nentsimbi kwalenza, ialuminium) ukwenza umaleko wokhuselo, ezi zixhobo kubandakanya isakhelo sebhedi, isitulo esinamavili, i-guardrail, ikheshi, inqwelo, njl, amathuba okunxibelelana nezigulana aphezulu, kulula ukubambelela kwiintsholongwane, iibhaktheriya njalo njalo.
Ngokophando, iNyakatho Melika yeyona ntengiso inkulu emhlabeni yothambiso lwe-antibacterial powder, kunye nokukhula okuqinileyo kule minyaka mihlanu izayo. EMntla Melika, kuye kwakho ukwanda kwemfuno yokuthintela intsholongwane ebangela ukhathalelo lwempilo, kwaye imigaqo engqongqo kumgangatho womoya ongaphakathi ibangele ukuba abavelisi benkqubo ye-HVAC basebenzise umgubo wokulwa neentsholongwane ukuqinisekisa umgangatho womoya. IYurophu yeyona marike yesibini ngobukhulu emhlabeni yokuhombisa umgubo, kunye neemarike ezinkulu kubandakanya iJamani, i-United Kingdom, iFrance, iSpain neRussia. Oku kungenxa yokuphuculwa kolwazi lwabantu ngococeko lokutya, ukhuseleko lomgangatho womoya ongaphakathi kunye nempilo kwingingqi. Ukongeza, banikezela ukubaluleka okukhulu kukhuseleko lwabasebenzi bezonyango kunye nezigulana, ngakumbi ngexesha lokuqhambuka kwe-COVID-19. Elinye lamanyathelo okuphelisa ukusasazeka kwintsholongwane kukusetyenziswa kwento yokugaya umgubo wokulwa neentsholongwane.